လက္ကား mouse ကို pad ပါ - MEETION
လက္ကား mouse ကို pad ပါ
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ လက္ကား mouse ကို pad ပါ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက် Shenzhen Meetion Tech Co. , Ltd. သည်တရုတ်တွင်အဖြတ်ဆုံးနည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် လက္ကား mouse ကို pad ပါ.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Computer ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်အစုအဝေး C4120
item no ။ : MT-C4120အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်, အဖြူရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: Black: Black: 6970344732155 White: 69703444732162ဖော်ပြချက် - Full-Size Keyboard, Reginnable resolution, power-effectable wireless နည်းပညာ။
အစည်းအဝေး Chromatic Gaming Mouse GM20
ပစ္စည်းအမှတ်။ : MT-GM20အမှတ်တံဆိပ်: MEETIONအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်EAN: 6970344731530ဖော်ပြချက် - Ergonomic 4800DPI Gaming Mouse
MD121 ရှည်လျားသော RGB Gaming Mouse Mote
သင်၏စားပွဲခုံကိုကာကွယ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏မောက်စ်ပြားသည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အသုံးမပြုပါ, ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်အတွက်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုပေးရန်လုံလောက်သော area ရိယာကြီးတစ်ခု, Slow မဟုတ်သောပစ္စည်းသည်သင့်အားကီးဘုတ်ကိုကပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်& Hard Keyboard နှင့် Desk အကြားပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Gaming Mouse Hera G33300 ခြေရာခံခြင်း
item no ။ : Mt-g3330အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447311738ဖော်ပြချက်: PMW330 8000DPI ဂိမ်းမောက်စ်